Ngiyethemba izinto zizomvuma uBavuma - Impempe
Ngiyethemba izinto zizomvuma uBavuma
UTemba Bavuma osanda kuqokwa njengokaputeni wamaProteas emidlalweni yosuku olulodwa neyeT20, ngithemba ukuthi uzothola ukwesekwa akudingayo ukuze kungathiwa uhlulekile ngelinye ilanga.
Ukuba ngukaputeni wamaProteas akuyona into encane ikakhulukazi njengoba leli qembu selahluleka lancama ukuwina okuthile selokhu iNingizimu Afrika yabuyiselwa emidlalweni yomhlaba. Ngaphandle nje kwalokho kuningi ukukhuluma okuhlale kukhona kumaProteas okuhlanganisa nokuthi iqembu limeleleke ngendlela yini yizo zonke izinhlanga.
Isinqumo sokunika umdlali omnyama ithuba lokuhola amaProteas ngisincoma kakhulu kodwa engikufisayo ukuthi bonke abantu baleseke ngokuphelele iqembu njengoba kade kwenzeka kokaputeni abedlule.
Kungokokuqala ngqa ukuthi amaProteas aholwe ukaputeni omnyama. UHashim Amla owake wabamba isikhashana njengokaputeni weqembu emidlalweni yamaTest, namanje angazi ukuthi yini eyenza ukuthi asheshe asishiye lesi sikhundla.
Ngesikhathi u-Amla eshiya lesi sikhundla eminyakeni edlule wakhala ngokuthi unengcindezi futhi wayefuna ukubeka umqondo wakhe ekudlaleni hhayi ekuholeni iqembu. Nokho kwaba khona ukusola ukuthi kukhona okungale okwenza ukuthi u-Amla ashiye phansi yize kwagcina kuthule kanjalo.
Ithemba enginalo ngokunikwa kukaBavuma lesi sikhundla ukuthi akuve kuyingoba kuwukuzama ukudicilela phansi ikhono nokuzethemba kwakhe. Phela akulula ukuqonda izinto ezenzeka kwikhilikithi njengoba eyaseNingizimu Afrika inezinkinga eziningi kangaka. Angifisi ukuthi ngelinye ilanga kuvele ukuthi amaProteas awaphumeleli ngoba nakhu eholwa uBavuma, ngoba vele leli qembu nempumelelo yizinto ezimbili ezihlukene kakhulu.
Uma kukhulunywa ngamaqembu esizwe aseNingizimu Afrika elekhilikithi yilona elisashaye into ephansi kakhulu kangangoba lihlulwa ngisho yiBafana Bafana le ehlale igxekwa. IBafana iyalushaya impela udaka kodwa seyake yasijabulisa ngokuwina i-Africa Cup of Nations (afcon) ngo-1996. Ngiyazi iyona yodwa impumelelo yeBafana esingakhuluma ngayo leyo kodwa kungcono kona lokho kunesimo samaProteas angakaze asijabulise ngalutho.
Kungakuhle kakhulu ukuthi amaProteas awine okuthile eholwa uBavuma. Ngiyazi phela ukuthi akuthina sonke esijabulela ukuthi amaProteas anokaputeni omnyama, bakhona abashaya amakhala nabacanukile. Akumele banakwe bonke labo kodwa okubalulekile ukuthi uBavuma unikwe lesi sikhundla ngoba simfanele hhayi ngoba kwenziwa nje.
Ngo-2019 kube kuhle kakhulu ukuthi amaBhokobhoko awine iNdebe yoMhlaba eholwa uSiya Kolisi njengokaputeni. Nginalo ithemba lokuthi uBavuma uzofika nenhlanhla amaProteas agcine esijabulisile ngokuwina indebe ethile. Okudingekayo nje ukuthi esekwe uBavuma, ngabadlali abaphethe kumaProteas nabalandeli. Uma kwenzeka lokho nakanjani ngeke ayizwe ingcindezi yokuhola iqembu elivele libakweleta lukhulu abalandeli bekhilikithi baseNingizimu Afrika. Shwiii!
Previous Previous post: Seyiqoke abazothatha esikaKonco iCeltic
Next Next post: Igqemeke engeqiwa ntwala iSundowns ngoShalulile